Nabadoon Xaad oo ka hadlay Xariga Taliyihii Danab Hanjabaad adagna iu diray Villa Somalia | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Nabadoon Xaad oo ka hadlay Xariga Taliyihii Danab Hanjabaad adagna iu diray...
Nabadoon Xaad oo ka hadlay Xariga Taliyihii Danab Hanjabaad adagna iu diray Villa Somalia
Gudoomiyaha dhaqanka Beelaha Hawiye Nabadoon Maxamed Xasan Xaad oo caawa Warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa si adag uga hadlay xariga loo geestay taliyihii ciidamada Danab Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik Maalin.
Nabadoon Xaad ayaa sheegay in ay ka xun yihiin xariga sharci darada ah ee loo geestay taliyaha, waxa uuna sheegay in xarigaasi yahay mid abaabulan oo siyaasad iyo qabyaalad salka ku heysa ayna ka dambeeyaan dad ay ogyihiin balse magacyadooda uusan sheegin.
Waxa uu sheegay Nabadoon Xaad in xog ku heleen in uu socdo qorshe taliyaha dambi loogu yeelayo iyada oon maxkamad la saarin loona geenayo xabsiga Dhaxe Xamar uu sheegay in ay ku xiran yihiin Shabaabkii uu dagaalka kula jiray si halkaasi loogu dilo.
”Hada waxaa nasoo gaareysa ninka iyada oon maxkamad la geyn oon wax laga qorin in caawa la rabo in lagu dheelmo xabsiga Dhaxe oo Shabaabkii dagaalka kula jiray ku jiraan si halkaasi ugu dilaan, ujeedka laga leeyahay kaliya waa in ninkaasi dhinto,” ayuu yiri Nabadoon Xaad.
Gudoomiyaha Beelaha Hawiye ayaa si cad u sheegay in hadii sargaalkaasi dhibaato la gaarsiiyo in saameyn aan fiicneyn ku yeelan doono dalka iyo dowlada, waxa uga digay dadka qorshahaasi wada in ay ka jooaan falkaasi hadii kale ay ka shalay doonaan.
”Niman aan ognahay oon magacyadooda sheegeyn shirqoolka ay ka shaqeenayaan hadii aysan joojin ,saameyn xun ayuu mustaqbalka dhaw iyo midka fog ku yeelan doonaa, ma ganbaneyno hadii aan dowladnimo la rabin sharci la rabin ma aqbaleyn sida wax u socdaan waana ka dhiidhineynaa ” ayuu yiri Nabadoon Xaad.
Nabadoonka ayaan sheegay in Villa Soomaaliya hada wada awood sheegasho iyo sida ay rabto in wax u maquuneyso, waxa uuna ugu hanjabay in aan la isaga hari doonin lagana shaleyn doono hadii dhibaato la gaarsiiyo sargaalkaasi xiran.
Hadalka Nabadoon Xaad ayaa kusoo aadaya xili Taliyihii Ciidamada Danab Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik mudo bil ka badan ku xiran yahay Wasaarada Gaashaandhiga, waxaana warar soo baxaya sheegayaan in ay socdaan qorshe Villa Soomaaliya dambi ugu yeeleyso sargaalkaasi oo la sheegay in loo beegsanayo in Kheyre qaraabo la yahay owgeed.
Previous articleMagaalada Muqdisho oo Caawa laga dareemayo Kacdoon shacab lagu diidan yahay Dowlada Farmaajo
Next articleThe chairman speak Hawiye s about the arrest of Danab Commander and sends strong threats to Villa Somalia
Ciidanka Danab oo howlgal ku dilay Shiikh C/llaahi Gaare iyo ilaalo...